Marquette ပန်းခြံ• DutchtownSTL.org •ဒတ်ခ်ျတောင်း၊ စိန့်လူးဝစ္စ၊ MO
အရာရာအားလုံးအတွက် DutchtownSTL ၏အိမ်သို့ကြိုဆိုပါ၏။ ပန်းခြံ၊ Marquette အပန်းဖြေစခန်း၊ Field House နှင့်စသည့်အရာများအားလုံးနှင့် ပတ်သက်၍ သင့်အားသင့်ကိုနောက်ဆုံးပေါ်ထားပေးမည်။ သောမတ်စ် Dunn သင်ယူရေးစင်တာ.
Dutchtown ၏မြောက်ဘက်ပိုင်းတွင်တည်ရှိပြီး Marquette Park သည် Osage နှင့် Gasconade Streets အကြား Compton ရိပ်သာလမ်းကို ၁၇ resကကျယ်ဝန်းသည်။ ဒါဟာ Greataterttown areaရိယာထဲမှာအကြီးဆုံးပန်းခြံဖြစ်ပါတယ်။ ပန်းခြံသည် ၁၉၁၅ ခုနှစ်တွင်ယခင်ခိုလှုံခဲ့သောမိဘမဲ့ဂေဟာ၏နေရာတွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။
Marquette Park မှာဘာတွေဖြစ်နေသလဲ။
We မကြာသေးမီကမီးမောင်းထိုးပြ Marquette Park တွင်ဖြစ်ပေါ်နေသောအံ့သြဖွယ်လူထုအခြေပြုလှုပ်ရှားမှုများနှင့်တိုးတက်မှုအချို့ ငါတို့လည်းဆွေးနွေးတယ်၊ စိန်ခေါ်မှုတွေလည်းအများကြီးကြုံခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်တိုးတက်မှုတွေလုပ်နေတယ်၊ ​​၂၀၂၁ ရဲ့နွေရာသီက Marquette Park မှာအရမ်းကောင်းတဲ့အချိန်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆောင်းပါးကိုဖတ်ပါ DutchtownSTL ဘလော့ဂ်ပေါ်မှာ။
Marquette ပန်းခြံ Facilities များနှင့်အဆင်ပြေမှုများ
Marquette ပန်းခြံသည် South Side ၏အကြီးဆုံးပြင်ပတွင်အများပိုင်ရေကူးကန်ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၅ နွေရာသီတွင်ရေကူးကန်ကိုပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံခဲ့သည်။ Marquette ပန်းခြံ၏မဟာမိတ်များနှင့်ဆက်နွယ်အုပ်စုတစ်စု DT2 • Downtown Dutchtownရှိပြီး ရေကူးကန်ရှိပရိဘောဂအသစ်များအတွက်ဒေါ်လာ ၇၀၀၀ ကိုမြှင့်တင်ခဲ့သည်။ ပိုမိုကောင်းမွန်သောပတ်ဝန်းကျင်ကိုမြှင့်တင်ရန်ရေကန်ပတ် ၀ န်းကျင်ခြံစည်းရိုးမှဆူးဝါယာကြိုးကိုဖယ်ရှားရန်မြို့အာဏာပိုင်များကိုလည်းသူတို့ကစည်းရုံးခဲ့သည်။
ပန်းခြံ၏အနောက်ဘက်ခြမ်းတွင်ဘောလုံးအရွယ်အစားအပြည့်အစုံရှိသည်။ စနေ၊ တနင်္ဂနွေနေ့တွေမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှကစားသမားအများအပြားသည်အလွတ်သဘောယှဉ်ပြိုင်မှုတစ်ခုအတွက်နေရာယူထားသည်။ ဆောင်း ဦး ရာသီတွင် City Rec League မှလူငယ်များအတွက်ဘောလုံးအစီအစဉ်များကိုလုပ်ကိုင်သည်။ Marquette Park ၏မဟာမိတ်များသည်ဘောလုံးအဆောက်အအုံများ၏အရည်အသွေးကိုမြှင့်တင်ရန်မိတ်ဖက်များတည်ဆောက်ရန်လုပ်ဆောင်နေကြသည် Marquette ပန်းခြံတွင်ဘောလုံးမြှင့်တင်ရန်.
အဆိုပါ Marquette ပန်းခြံကွင်းဆင်းအိမ်
မကြာသေးမီကပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံခဲ့သောသမိုင်းဝင် Marquette Park Field House သည်ပန်းခြံ၏အနောက်ဘက်ခြမ်းရှိတောင်ကုန်းတစ်ခုပေါ်တွင်တည်ရှိသည်။ ကွင်းဆင်းအိမ်ကိုစိန့်လူးဝစ္စပန်းခြံဌာနသို့ခေါ်ခြင်းဖြင့်ဖြစ်ရပ်များအတွက်ငှားနိုင်သည် (314) 289-5300.
Gasconade နှင့် Minnesota ရှိပန်းခြံ၏အရှေ့တောင်ဘက်ထောင့်တွင်တည်ရှိသည်။ သောမတ်စ် Dunn သင်ယူရေးစင်တာ Thomas Dunn သည်အနုပညာစတူဒီယို၊ သရုပ်ပြမီးဖိုချောင်၊ စာကြည့်တိုက်နှင့်ကွန်ပြူတာဓာတ်ခွဲခန်းများဖွင့်လှစ်ထားသည်။ သင်ရှာလိုရသည် သောမတ်စ် Dunn သင်ယူရေးစင်တာ၌အတန်းနှင့်ဖြစ်ရပ်များ DutchtownSTL.org ပေါ်မှာ။
ပန်းခြံ၏အရှေ့ဘက်ခြမ်းရှိမင်နီဆိုတာရိပ်သာလမ်းနှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်တွင်ရှိသော Marquette Rec စင်တာတွင်ဘတ်စကက်ဘောကွင်းများရှိအားကစားခန်းမအပြင်လှုပ်ရှားမှုအခန်းနှင့်ရေကူးကန်အတွက်အံဆွဲခန်းအဆောက်အအုံများရှိသည်။ သောမတ်စ် Dunn သင်ယူရေးစင်တာနှင့် South Side Youth Council တို့သည်မကြာသေးမီက Rec Place စင်ပေါ်ရှိလူငယ် drop-in စင်တာတစ်ခုဖွင့်လှစ်ရန်ပူးပေါင်းခဲ့ကြသည်။
Marquette Park သည်အထက်ဖော်ပြပါကမ်းလှမ်းချက်များအားလုံးအပြင်တင်းနစ်ကွင်းသုံးခု၊ softball စိန်တစ်လုံးနှင့်ကစားကွင်းကြီးတစ်ခုပါ ၀ င်သည်။ အပန်းဖြေအဆောက်အ ဦး များပိုမိုလုပ်ဆောင်လာသည်။ ပန်းခြံသည်ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိခုံတန်းရှည်များနှင့်၎င်း၏ ၁၇ ဧကကျယ် ၀ န်းသောစိမ်းလန်းသောနေရာများနှင့်အတူအပန်းဖြေရန်နေရာများစွာကိုလည်းပေးသည်။ Field House ထိုင်သောတောင်ကုန်းသည် Dutchtown ၏အံ့မခန်းမြင်ကွင်းများကိုပေးသည်။
Marquette Park ရှိလူထုအခမ်းအနားများ
နွေရာသီတွင် DT2 နှင့်အခြားစပွန်ဆာများယူဆောင်လာသည် Dutchtown ရုပ်ရှင်ည ၂၂ ပေမြင့်သောမျက်နှာပြင်ကြီးပေါ်တွင်ရပ်ကွက်ရှိမိသားစုများထံသို့။ ရပ်ကွက်တွင်းအရင်းအမြစ်များကိုရယူရန်၊ အစားအစာများစားရန်အတွက်မုန့်များယူရန်နှင့်အမှောင်တွင်မိသားစုအတွက်ရုပ်ရှင်ကိုယူရန်အိမ်နီးချင်းများက Field House ၏ရှေ့မှောက်၌တောင်ပေါ်သို့ပျံ့နှံ့သွားခဲ့သည်။
Dutchtown Movie Nights အကြောင်းပန်းခြံနှင့်အနီးတစ်ဝိုက်ရှိအခြားနေရာများသို့သွားရောက်လည်ပတ်ပါ dutchtownstl.org/movienight.
Dutchtown တောင်အဝန်းကော်ပိုရေးရှင်း ဆောင်း ဦး တိုင်းပန်းခြံ၌ Common အသံပွဲတော်ကျင်းပသည်။ ပွဲတော်သည်ကမ္ဘာတဝှမ်းမှဂီတနှင့်ကခုန်ခြင်း၊ အစားအစာများနှင့်ရောင်းချသူများနှင့်အတူပါ ၀ င်သည်။ နှစ်စဉ်ကျင်းပသောပွဲတော်သည်ပါတီဥယျာဉ်တစ်ခုရှိပြီး Compton Avenue ကိုပန်းခြံအလယ်တွင်ပိတ်ထားသည်။
နွေရာသီတိုင်း Marquette အဝန်းနေ့ Marquette Park တွင်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကျောင်းပြန်တက်ပွဲကျင်းပပြီးကျောပိုးအိတ်များ၊ ကျောင်းအသုံးအဆောင်များ၊ ဆံပင်ညှပ်များနှင့်အခြားအရာများကိုကျောင်းနှစ်သစ်အတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်စေရန်ကျောပိုးအိတ်များ၊ ကျောင်းသုံးပစ္စည်းများနှင့်အခြားအရာများပါ ၀ င်သည်။ ပွဲ ဦး ထွက်ရဲတိုက်များ၊ မြင်းစီးခြင်းများ၊ တေးဂီတသံများနှင့်အသားကင်များပါ ၀ င်သည်။ Marquette အကြောင်းအားလုံးဖတ်ပါ ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်တွင်ဤရပ်ရွာနေ့
ဒီစာမျက်နှာကိုမျှဝေပါ Facebook က, တွစ်တာဒါမှမဟုတ် အီးမေးလ်လိပ်စာ။ ဤစာမျက်နှာကိုနောက်ဆုံးပေါ်မွမ်းမံခဲ့သည် သြဂုတ်လ 26th, 2021 .
ဒိန်းမတ် Marquette ပန်းခြံ